Al-shabaab oo beenisay wararka sheegaya inuu geeriyooday Abuu Cubeyda – Bulshoweyn Media Network
Al-shabaab oo beenisay wararka sheegaya inuu geeriyooday Abuu Cubeyda
Kooxda Al-shabaab ayaa markii ugu horeeysay ka hadashay warar saacadihii ugu dambeysay la isla dhex-maraayay ee ku saabsanaa in Hoggaamiyahooda Axmed Diiriye Abuu Cubeyda uu geeriyooday.
War qoraal ah oo lagu daabacay bogga sida weyn u taageera Al-shabaab ayaa waxaa lagu beeniyay in Hoggaamiye Axmed Diiriye Abuu Cubeyda uu geeriyooday, iyagoo soo xiganaya mas’uul sare oo aan magaciisa la shaacin balse ka tirsan Al-shabaab.
Qoraalkaasi ayaa sidoo kale lagu sheegay in wararkaasi ay warbaahinta qaarkood baahiyeen ay yihiin kuwo been abuur ah islamarkaana aan waxba ka jirin.
Warkaasi ayay ku tilmaameen inuu yahay oo kaliya mid lagu daboolayo heshiiskii ay 16-ka bishaan magaalada Muqdisho ku kala saxiixdeen dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya, kaas oo ahaa in Itoobiya maalgashato 4 ka mid ah dekadaha dalka Soomaaliya.
“Warka kasoo yeeray kooxda Farmaajo ee ku aaddan inuu geeriyooday ama uu xanuunsan yahay Sheekh Abuu Cubayda waa waxba kama jiraan, waxaa looga dan-leeyahay oo kaliya in lagu daboolo heshiiskii ahaa in dekedaha Soomaaliya oo dhan lagu wareejiyay Itoobiya” Sidaasi waxaa lagu qoray bogga taageera Al-shabaab.
Dhinaca kale, warbaahinta ku hadasha afka ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa baahisay warka la xiriira geerida hoggaamiyaha Al-shabaab oo ay sheegtay inuu ku geeriyooday degmada Jilib ee gobolka J/dhexe.
Illaa iyo haatan ma jirto war rasmi ah oo xaqiijinaya geerida Hoggaamiyaha Al-shabaab Abuu Cubeyda, marka laga reebo wararka saacadihii ugu dambeysay la isla dhex-maarayay.
Abuu Cubeyda ayaa noqday hoggaamiyaha Al-shabaab bishii Disember ee sanadkii 2014-ka, kadib markii diyaaradaha Mareykanka ay duqayn cirka ah ku dileen hoggaamiyihii isaga ka horeeyay ee Axmed Godane.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaanan illaa iyo haatan war kasoo saarin wararka sheegaya inuu geeriyooday hoggaamiyihii ugu sareeyay Al-shabaab Axmed Diiriye Abuu Cubeyda, wallow Al-shabaab ay dhankooda beeniyeen.
Copyright © 2007 - 2019 | Bulshoweyn Media Network